Horukon ne Iqela loqwalaselo
トップページ ＞ 言語 ＞ コーサ語 ＞ Horukon ne Iqela loqwalaselo
E Horukon capture, oko kuthiwa ukuba zihanjiswe jackpot ngamaqela umatshini pa kwi transformer. Ngoko ke, kuthiwa olusebenzayo Horukon capture, ndifuna ukubona ukuba uhlobo izinto ubudlelwane phakathi Horukon kunye namaqela. Umatshini pa ibiqhagamshelwe yi transformer ukuze ufumane umbane.
ngenani ukuba idityaniswe nesiguquli, nezaziwa besahlukaniswa kumaqela amane ukuya amahlanu. Okanye uye iqela kule nombolo ekupheleni, okanye uye waba iqela kwicala-by-ecaleni inani lezibuko, kubonakala ukuba yokuba bobabini sele zamkelwe.
Okokuqala, xa ilixesha ufuna ukucima hit enkulu, ngokutsho komthetho othile, Horukon kukuthi, Ndiyakuthanda enza isigwebo Jackpot. Liza ixesha jackpot ukwenzeka kwagqitywa, Horukon phezu isiseko iqela, ukuze bazobe iqela ukujikelezisa hit enkulu.
Kwiqela elaphumelela, jackpot iqalisa ukuba yenzeke, ngaphakathi kwiqela apho jackpot sele sivunyiwe, kukuba ezithile xesha jackpot uyaphuma. Ukongeza, kwi Horukon, ukuze ayenze ibhola ngaphandle lonke pa parlour kwi-avareji, iqondo ingenzeka ngexesha kunye hit enkulu ukujikelezisa hit enkulu, okuthethiweyo ukulawula.
loo, okanye uphume na ukuqhubela phambili kwi qela jackpot kungenzeka ukuba kwenzeke, ukuqikelela iqela ukuba hit enkulu ezayo iya kwenzeka, kuba Neraiuchi nguye wokubamba Horukon.
Ungasebenzisa inkqubo ubuso uqinisekiso, lo gama ukhethe umntu khupha ezi jackpot, kwakhona intelekelelo okuti ukwenza lelotho iqela.